Macna ma laha inta badan waayo-aragnimo aad abuurista waxyaabaha video, waxa ay noqon kartaa mid halgan ah si aad u hesho madal ay xaq u software si ay u abuuraan aad masterpiece soo socda. Xitaa haddii mashruuca aad ka shaqeeya waa markii ugu horeysay aad weligaa isticmaali trimmer MP4 ah, aad rabto in aad ogaato in software aad isticmaalayso waa la isku halayn karo, fudud si uu u barto oo uu leeyahay muuqaalada ku filan iyo awoodaha in aad ku guuleysato " t hadhi lug go'an dhexe ee mashruuca, oo raba in ka badan.
Horumarinta ka soo baxay in uu yahay labada user saaxiibtinimo oo sare oo ku filan si ay u bixiyaan wax soo saarka ah oo khibrad leh oo la safeeyey dhammeeyayna ay u muuqataa in ay wax ka mid ah oo caqabad ku ah. In yar oo ka mid ah barnaamijyada dib kulmaan labada cutub oo shuruudood, oo noqon lahaa si siman guriga ganacsiga deegaanka ah oo ku jirta gacanta laylis ah oo ay la trimmer MP4 hore ka shaqeeya.
Part1: Top 3 MP4 laambadihii lagu for Windows
Part2: Top 3 MP4 laambadihii lagu for Mac
Part3: Top 3 MP4 laambadihii lagu macruufka
Part4: Top 3 MP4 laambadihii lagu for Android
Part5: Top 3 Online laambadihii lagu MP4
Trimmer ayaa MP4 sare ee Windows waa Video Converter Ultimate si fiican u yaqaan oo cajiib fiican oo heer sare. Soo diyaariyay Wondershare, barnaamijkan way fududahay in la isticmaalo iyo saaxiibtinimo xitaa bilowga ah in uu helo dib u eegista weyn guddiga guud ahaan.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa video ka Converter ugu fiican ee suuqa ee maanta. Iyadoo si fudud ah si ay u isticmaalaan, interface user xirfadeed iyo Suite ka mid ah muuqaalada u oggolaan doonaa badalo videos in qaabab kala duwan, xaalkaa videos la trimmer ah MP4 xirfadeed oo kor loogu qaado video qabtay, download videos, abaabulo files warbaahinta, videos qabsaday oo ay daawadaan sida ugu fiican ee online madadaalo in ka badan 150 qaabab file, Wondershare Video Converter Ultimate handily garaacday tartanka ee dhinac kasta ee ciyaarta.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa khayraadka weyn loogu talagalay dadka waayo-aragnimo yar video tafatirka, waqti xadidan oo kaliya in ay soo saaraan wax soo saarka ah oo khibrad leh, ama hawsha diinta in ay la tacaalaan oo u baahan in badan processing ah. Habka ugu Wondershare Video Converter Ultimate waxaa loogu tala galay, waxa ay bixisaa qaababka xirfadle in an editor khibrad wax soo saarka video waxay u baahan tahay, laakiin waxa ay sidoo kale bixisaa fudud ah si ay u isticmaalaan interface in bilaabayso heli doonaa dhaba adoptable.
Wondershare Ee Video Converter Ultimate saamaxaya kuwa isticmaala inay si fudud oo dhaqso beddelid DVDs guriga ujeedooyin gurmad, ama si aad u daawato on aaladaha kale ah iyada oo aan drives indhaha. In macno ahaan saddex qasabno, laylis ah kabixi kartaa DVD ah oo wuxuu galay qaab kale ee warbaahinta oo ay leeyihiin file u badbaadiyey. Oo dadka isticmaala kuwaas oo si degdeg ah jarida xundhurta cable TV, awoodda Wondershare Video Converter Ultimate ay ku qulquli PC video Telefishanka waa hab fiican in uu sii joogo xiran warbaahinta ugu fiican halkaas.
Developer: Wondershare, Shenzhen, Shiinaha
Download Website: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html
Avidemux ayaa koobaa, muuqaalada adag oo ay taageertaa qaabab file badan. Iyadoo Suite ka mid ah qalabka MP4 tafatirka xirfadeed oo kale ah, waa adag tahay in lagu fekero waxa ka mid ah sidii xal fiican u user guri, laakiin Avidemux buundada farqiga u dhaxeeya fududaato in la isticmaalo ee macaamiisha iyo Suite aad u xirfadeed ee qalabka caawin kara MP4 adag hawlaha tafatirka.
Daluugta file MP4 ah waa mid fudud la Avidemix. Siinta labada fursad u galaan jir ah, oo qor waqtiga stop ah, ama in la isticmaalo interface ka storyboard in ay jar file MP4 ah, Avidemux waa barnaamij dareen leh oo fudud si uu u barto. Dadka isticmaala kuwaas oo doonaya inay soo gabagabeyso heerka ku xiga, qabsado Deji iyo samaynta kaabidda inta lagu jiro goo MP4 ah, in la heli karo, sidoo kale, oo dhan qiimo hoose ee lacag la'aanta ah.
Download Website: http://avidemux.sourceforge.net/
3. Video Splitter 1.0
Barnaamij buuxa featured, free software oo la xirfad loogu talagalay by sameeysa SPGSoft, Inc., 1.0 Video Splitter ah aalad walba waxa ay u baahan tahay in ay, ka dibna ka badan dusheeda ku darayaa. Daluugta file MP4 ah waa hab si dhakhso ah oo la Video Splitter 1.0. Its interface waxaa loogu talagalay in ay oggolaadaan in bilowga iyo dhammaadka wakhtiga doorashada, oo ay ka mid yihiin "ciyaari xulay" doorasho si users u eegi karaan goobaha ay ka hor goo la bilaabay ah. Dadka intooda ugu badan, goobaha default in SPG Video Splitter 1.0 noqon doonaa kaamil ah. Dadka isticmaala badan oo horumarsan, dadka oo damacsanaa in la isu geeyo badan iska jaro wada files MP4 galay video cusub, ama dadka qaba arrimaha la xiriira tayada leh file asalka MP4 ay rabaan in ay jar, waxaa jira gol leeyahay iyo tafatirka qoreysa fudud loo heli karo ka screen guriga ee bixi karo taas software. Jeer Conversion aad u fiican, sida interface si fiican ku suntan, oo waxaa jira doorashooyin heer xirfadeed diyaar u user ka mid dooni inuu quusin qoto dheer.
Download Link: http://www.spgsoft.com/video-splitter.html
Shayga ugu fiican ee Windows kibirsan aawadeed waa cross-madal. Marka tifaftirayaasha iyo soo saarayaasha raadinayso xirfadle ah, u jeedi-muhiimka ah ee barnaamijka oo u oggolaan doonaa MP4 fudud falinjeeerka iyo muuqaalada tafatirka sare, waxay u leexdeen ka Wondershare horumarinta kuwaas oo caan ku ah awoodda ay u leeyihiin in la isu geeyo tayada xirfadeed ee fudud oo ah in la isticmaalo xirmo.
Wondershare Ee Video Converter Ultimate for Mac ayaa si fiican u heleen sidii qalabka oo dhan-in-ka mid ah qof kasta ka-mar hore video editor u MP4s geynta xirfadeed iyo saamaynta codsanayso. Dib u eegidda alaabta Video Converter Ultimate ee Mac dhan isku raacsan yihiin in tani ay tahay, xalka ugu fiican ee ugu universal ee baahida video tifaftirayaasha ee heer xirfadeed kasta. Xawaaraha ee trimmer MP4 waa mid cajiib ah, garaaceen alaabooyinka kale ee tartanka soddon jeer. Iyada oo waafaqsan Ultra High Qeexid, wax soo saarka dhamaadka abuurin waa xirfadle ah keliya oo cajiib ah, waxa ay ugu sareeya dhamaadka video tayada suurto gal ah, iyo wax soo saarka ugu horumarsan farsamo ee aad samayn kartaa.
Xitaa hawlaha video ugu fudud ee la xiriira waxaa qabta Video Converter Ultimate for Mac ah. Laga soo bilaabo daawashada cajaladaha in kasta oo qaab ay u duuban oo gubanaya videos, hawlaha maamulka file joogtada ah ee lover warbaahinta ah waxaa qabta. Marka aad rabto in aad u qaadato heerka ku xiga, iyo in la abuuro videos fantastik ah u dhalashada, olole suuq ama mashaariicda dugsiga, wax aad joojinta la Wondershare ee Video Converter Ultimate for Mac jirto!
Download Website: http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/
2. Free Video magaabay Joiner
Free Video magaabay Joiner waa mid fudud oo si sahlan loo isticmaali Mac gabal madal of software in kaliya waxa ay sheegtay in ay sameeyaan. Buuq la'aan xad dhaaf ah ama qalooca uga yaacday ilaa waxbarashada, Free Video magaabay Joiner ogolaanaysaa user a si fudud oo dhaqso jar MP4 ah soo gudbin hoos xaqa ah qaybaha lagama maarmaanka ah. Wixii laylis dhamaystiran, awood u leeyahay inuu sheeg bilaabatay iyo joojiyo jeer ama in ay isticmaalaan qaabka style sheeko-guddiga doorashada waa weyn. Isla markiiba on xaq sare ee shaashadda waa xiriir ah in ay ciyaar saaxiibtinimo oo waxtar leh caawimaad files. Fudayd ee la isticmaalo waa quruxsan laga qabanin. Free Video magaabay Joiner sidoo kale u ogolaataa user ay u wada biiro clips cut, kaas oo noqon kara a baado waqti fiican marka aad ururinayo mashruuc.
Download Website: http://dvdvideomedia.com/
3. MP4 Trimmer
Laga heli karo App Mac ka Store, My MP4 Trimmer sameeyaa waxa uu sheegaayo ee sanduuqa, jidaynayey isticmaala inay si fudud u dhigay dhibcood bilowga iyo dhamaadka ah ee video ah oo ku jiid video cusub lagu qeexay galay file cusub. Wixii isagana doonaya in ay video qabashada play, ama screen shot daqiiqado muhiimka ah, My MP4 Trimmer waa xal miisaanka wanaagsan. Dadka Kuwa ururinayaan videos kubadii, ama aad u baahan xirmo sahlan oo dhakhso ah oo u oggolaan doonaa abuurka ah ee bandhigga multimedia ah ka dhergi doonnaa interface ka dhamaadka hore iyo code backend in xajiyo Trimmer MP4 shaqada. Keliya ku xaddidan lagu kaydiyo hardware helaya cusub, MP4 ka uncompressed, My MP4 Trimmer waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa ugu Mac.
Faa'iidada kala of My MP4 Trimmer waa ay xadaynta jar kaliya dhibcood keyframe. Tani waxa ay yaraynaysaa awoodda ay user a si qalad ah loo abuuro file ah oo musuqmaasuq ah oo loo tirinayay, laakiin waxa ay sidoo kale ku soo rogay xad dhibcood at kaas oo jaritaanka waa suurto gal. Encoder MP4 waa awood falinjeeerka dura keyframe u dhexeyso 4 ilaa 10 dura labaad. Tani waa in ay bixiyaan dabacsanaan ku filan xitaa ugu adag Qorniinkaas video shaqada tafatir ah, oo u oggolaan doonaa dadka isticmaala in ay ka faa'iidaystaan ​​xawaaraha iyo fayl daacadnimadayda dadka badankooduna waxay jecel yihiin marka halabuurka video.
Download Website: https://itunes.apple.com/us/app/my-mp4-trimmer/id781631729?mt=12
Dhexgalka Apple ee la-soo-saarka video uu abuuray barnaamij aan xuduud lahayn oo si sahlan loo isticmaali oggolaanaysa in xitaa bilowga sameeyo filimada xirfad-fasalka ka iPhone ama iPad. MP4s daluugta on go waxa uu noqday habka fudud oo fududeeyey, iyo awoodda sii kordhaysa ee user dhamaadka in la sameeyo video in kooxda ay xafiiltamaan in soo saaray guri-soo-saarka xirfadeed waa mid cajiib ah.
iMovie keenay badan oo technology ah in ka dhigtay kacaankii video suurtagalka ah. Kooxda horumarinta Apple ayaa ka dhigtay in ay fududahay in dadku si jar MP4s, dalban saamayn tafatir iyo xitaa ku dar isjiidka filimka si ay si shakhsi videos. Tayada saarka ayaa si weyn u beddelay tan iyo iMovie agagaarka yimid, iyo dadka isticmaala xaqiiqada ah in tiyaatarka iMove la guraa in la kordhiyo dhamaan qalabka madal Apple raaxaystaan. Heli interface ka fududahay in la isticmaalo, iyada oo inta badan ku dhaqmaadka dhamaystiran saarka khabiir in ka yar saacad bilowga ah.
Download Website: https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434?mt=12
Naqshado JPower ayaa abuuray Video Editor FREE ah ee madal macruufka ah. Waxaa loo qorsheeyay in ay maamulaan ee iPad iyo iPhone iyo qalabka kale ee kor ku xusan macruufka version 6.0, waxaana la filaayo in iPhone 5. Video Editor FREE waa gabal weyn ee software loogu talagalay dadka doonaya in ay ku darto cod, qoraal iyo in music videos, ama u habayn iyo video content laakiin waxa ay sidoo kale trimmer ah MP4 fantastic. Iyada oo awood u leh inay jar files MP4, midowdo video iyo wadaagno si toos ah gudaha app, Video Editor FREE waa khayraadka weyn.
Developer: naqshado JPower, LLC
Download Website: https://itunes.apple.com/us/app/video-editor-free/id450722848?mt=8
Suuqa Kala hadal ayaa, Inc. ayaa isugu wada barnaamij u fududahay oggolaanaysa in iPhone iyo iPad users abuuro video tayo aad u sarayso oo ku tago! Videos Isku jira ee maktabadda user ee, content in uu soo saaray internetka, iyo music, voicework, sawiro - badan nooc kasta oo warbaahinta in user a faa'iidaysato karo weyn, qeexitaanka sare, filim tayo sare leh oo la soo saaray karaa a Videolicious saarka!
Oo qiimaha gabi ahaanba bilaash ah, in ka badan 2 milyan oo dadka isticmaala ay ka faa'idaysteen Videolicious. Waxaa waddaa on version macruufka kasta oo kor ku xusan 7.0, taas oo ku hadla in barnaamijyada tayada in la adeegsado sida ugu fiican ee suurtagal ah hardware. Suxufiyiinta isticmaali kartaa Videolicious duurka ku ah in ay kala ay b-ku ambadeen, oo marna ka walwalin ku saabsan tayada wax soo saarka. Xulashooyinka la Falanqeynta iyo dagdag-post waa weyn oo abuuraha on go ah.
Developer: Suuqa ayaa hadal, Inc.
Download Website: http://itunes.apple.com/gb/app/videolicious/id400853498?mt=8
Haddii aad rabto in aad barnaamij waa Android cross madal, oo ubadan shaqada ee ahaa abuuridda oo tayo sare leh, aad u cajiib ah iyo video arrangments xirfad aad u, Magisto waa mid ka mid ah in ay marka hore isku day. Waa awoodda ay u soo shirin videos, sawirada galay fiican, filimada midaysan in xitaa allw aad ku darto soundtrack ah - oo dhan iyada oo aan wax u samaynaysaan! - Waa feature weyn qarka u app ah iyo kuwa qiimo yar. Magisto yahay, cajiib ah, oo lacag la'aan ah.
Iyadoo lagu abaal marinta Choice Editor ee Google Play ee 2013, ku dhiirigelinayaan in uu at Magisto aanan la joojin innovating. Waxa ay si joogto ah kor dhisay saldhig feature barnaamijka si loogu daro fursadaha cusub sida kanaalada iyo Qashin - halkaas oo aad isticmaali kartaa waxyaalaha ay ka kooban aad rabto, shakhsi agagaarka aad u dhadhan.
Haddii aad samaynayso fudud video tafatir sida lafdheerta ama falinjeeerka MP4s, aad ku raaxaysan doonaa xog ah ee interface Magisto ah. Haddii aad rabto in uu laaban oo soo saara filimada ugu fiican gaaban ee sanadka, aad noqon doontaan yaabeen qaababka Magisto keenaa miiska. Noqo guusha ka socda Project Green-light ka qalab Android adigoo isticmaalaya Magisto.
Download Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magisto
Android users leeyihiin Koox ka mid ah barnaamijyadooda uu ka soo xusho marka ay timaado si buuxda u horumarsan, codsiyada video tafatirka xirfadeed ka istuudiyaha si fiican u ixtiraamo. VidTrim ka Goseet waa tusaale ka mid ah jihada ay tahay in Chine badan video khalkhalgelinta yihiin in. Iyadoo muuqaalada fudud sida MP4 falinjeeerka laga heli karaa taabashada badhanka ah, suuqa uu noqday u furan horumarinta qaababka xirfad dheeraad ah oo ku adag in loo isticmaalo in ay degan yihiin oo kaliya sii on iPhone, ama Suite desktop video nidaaminta.
VidTrim uu awood u leeyahay in aan kaliya jar files MP4, laakiin sidoo kale inay soo saaro audio, midowdo videos, iyo transcode video ka MP3 in MP4. Geedi socodka diinta la VidTrim lagu soo waramayaa in ay aad u wanaagsan ahaan, iyo khasaaro yar yahay in la filan karo. Intaa waxaa dheer, taageero ee Processor ARM oo x86 isku code set waa quruxsan sare, oo waa sidii taageero loogu ARMv7NEON. Tani waxaa dheer xad dhow ka dhigi doonaa VidTrim tartan dhab ah u shidmaan jeebka video tafatirka iyo wax soo saarka kale ee suuqa sida hardware cusub ku dhufan doonto jidadka.
Download Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goseet.VidTrim&hl=en
Andromedia Video Editor waddaa on set aad u kala duwan ee Android OS, oo waxay bixisaa Suite weyn oo qalab video tifaftirayaasha iyo soo saarayaasha isticmaali kartaa iyada oo aan wax cabsi ah ka dhibaatooyin tayo leh oo ku saabsan noocyo kala duwan oo dhufto ee hardware Android. Andromedia Video Editor waa isticmaalka fudud aad u, iyo in ay design. FeverApps ayaa ka soo baxay in la abuuro barnaamij layaabna hal-taabashada ah, oo haddana isu keena qaar ka mid ah qalabka video tafatirka ugu horumarsan oo dabacsan halkaas maanta.
Iyadoo interface ah storyboard jiitaa-iyo-dhibic, Andromedia Video Editor waxaa loo dhisay in ay foolproof. Waxaa jira ku dhawaad ​​jirto si ay qof ayaa doonaya in ay qabtaan hawlaha fudud sida falinjeeerka MP4s si ay u xir ilaa. Interface waa uun rasaasta caddayn. Dhinaca kale, ee macaamilka miyir qabo khibrad dheeraad ah oo tayo leh oo raba in ay jar file MP4 ah, laakiin sidoo kale doonaya in ay awoodaan in ay ku darto saamaynta, isu geeyo audio iyo video, iyo xataa isticmaalaan qaabab file badan, Andromedia Video Editor idin siin doonaa dabacsanaan iyo saamaynta aad u baahan tahay.
Interface casriga, la heli karo oo ay fududahay in la shakhsiyeeyo iyo waayo-aragnimo tafatirka si degdeg ah oo dareen leh ka bilow ilaa iyo dhamaad wareega ka soo xirmo software Andromedia Video Editor in mid ka mid ah seddexdii ciyaaryahan ee Android MP4 video laambadihii lagu heli karo.
Download Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catflow.andromedia&hl=en
Videocutter Online waa trimmer ah MP4 xor ah oo buuxa ciyaaray. Waxa aan kaliya ayaa bixiya MP4 ugu weyn falinjeeerka ama lafdheerta waayo-aragnimo oo ka mid ah waxyaabaha online, laakiin ay design aad u ogolaanaya inuu noqdo barnaamijka si buuxda u shaqaysa, weli unintimidating in xitaa bilow ah si deg deg ah u isticmaali kartaa. 123apps Habka ayaa isku dhafan Help galay design codsiga kor u laab ah waa axdiga cajiib ah in ay macaamiisha ku wajahan diirada.
Videocutter Online waxaa loogu talagalay in hab sadex talaabo ah. Suugaan, waxaa jira sadex kaliya fursadaha soo bandhigay si user ah. Si kastaba ha ahaatee, in set feature xadidan dureeri jira wax badan oo fursado taas oo ay u fududaato in la jar files MP4 isticmaalaya Videocutter Online. By inputting URL ee video in uu ku kaydsan online, ama uploading video ka Google Drive, ama xataa Author in file ah oo ku kaydsan degaanka ee computer ama qalab mobile, user dhameystiray tallaabada ugu horraysa. Tallaabada labaad waa jaritaanka ee file MP4 ah. Inkastoo Videocutter Online taageertaa badan oo kaliya files MP4, waxaa si cad u ah hogaamiyaha web-ku salaysan u falinjeeerka MP4s ah. Marka user ayaa jeexan lagama maarmaanka ah (haa aad samayn karto in ka badan hal mar!), Videocutter online jirtey user ay u badbaadin faylka MP4 iska jaro, iyo in ay tahay!
Waxaa jira kaliya hal khasaare weyn ku MP4 processing falinjeeerka online. Xuduudda ay size file soo rogtay inta badan wax soo saarka software aad u fiican waxaa sabab u ah bandwidth iyo server kaydinta qabanqaabada qaali in ay leeyihiin si uu u jiro on dhamaadka dib si ay u taageeraan beddelaad xad-dhaaf ah oo waxaan ka dhigi dhici deg deg ah. Wixii files ka badan 500 MB ee size, isku dayo xal aan internet-ka ah in ay jar files MP4.
Download Website: https://online-video-cutter.com/
Sida Videocutter online, Cellsea waa interface fudud oo si sahlan u barteen in ay bixisaa shaqeynta xadidan. Hurno habka MP4 falinjeeerka ah, xadka Cellsea soo gudbin Uploads 25 MB, laakiin waxay bixisaa wax soo saar iyo toban nooc oo file kala duwan. Cellsea kuu ogolaanayaa inaad geliyaan file ah oo ku kaydsan on your computer ama qalab mobile, ama in la tilmaamo web interface ay sahlan tahay in la file ah online MP4 oo aad rabto in aad jar.
Download Website: http://www.cellsea.com/free-online-video-editor
3. Wincreator Video magaabay
Waxa suurto gal ah trimmer MP4 in qiyaastii online ugu dheer, ka Wincreator Video magaabay Uploads file xad 50 MB, laakiin wax badan oo ka mid ah dabacsanaan si user dhamaadka ee sida files yihiin jaro siinayaa. Awoodda in ay ku eegaan wax soo saarka ka hor inta isbedel file waa cajiib qiimo leh iyo hoos u Rework. Suite ayaa ka mid ah waxyaabaha Wincreator sidoo kale u oggolaanaysa in falinjeeerka MP3 files, abuurista GIFs, iyo diinta Youtube videos in files MP3 music. Sida xaqiiqada ah mid ka mid ah laambadihii lagu MP4 preeminient internetka maanta, Wincreator waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan.
Download Website: http://wincreator.com/video-cutter
Best MKV Free iyo Online in converters MP4 on Windows iyo Mac
Siyaabaha la isu Play Mp4 iyo MTV Online
> Resource > MP4 > Top 15 laambadihii lagu MP4 for Windows / Mac / macruufka / Android